Ogaden News Agency (ONA) – Tobanaan qof oo ku geeriyoodey laba weerar oo ka dhacay Muqdish
Tobanaan qof oo ku geeriyoodey laba weerar oo ka dhacay Muqdish
Qarax aad u culus ayaa ka dhacay banaanka hore ee Hotel SYL oo aan wax badan ka fogeyn xarunta Villa Somalia. Qaraxa kadib waxaa la maqley rasaas xoogleh oo dhacaysa.
Muddo 40 daqiiqo ah kadib qaraxii kowaad ayaa mar kale la maqley qarax kale oo culus, kaas oo la sheegay in uu ka dhacay Beerta Nabadda (Peace garden) oo loo nasasho tago maalinta Jimcaha ah.
Hay’adda sirdoonka Dowladda ee NISA ayaa dadka uga digtey in ay u dhawaadaan gawaarida yaala Baarkinka beerta Nabadda, kuwaas oo al-Shabaab loo badinayo qaarkood in ay ku xireen Bom, waxaana ugu yaraan qarxay afar gaari.
NISA waxay sheegtey in ay dileen afar nin oo ahaa kuwii weerarka labaad ee beerta Nabadda ka qayb qaatey, hay’adda sirdoonka ee NISA ayaa sheegtey in ay weerarka ku waayeen laba askeri oo ciidankooda ka mid ahaa, kadib markii weerarka u horeeyey qabsadey meel Isbaaro ah oo NISA joogtey.
Inta la og yahay ilaa hadda ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyoodey, Isbitaalka Madiina waxaa la gaarsiiyey dad aad u badan oo ku dhaawacmey weerarka
Al-Shabab ayaa sheegtey in ay weerarka ka danbeeyeen, waxaana ay sheegteen Malayshiyaad ka tirsan in ay gudaha u galeen Hotel SYL.
Waa weerarkii labaad ku nool magaalada Muqdisho.
Weeraradan ayaa dhamaantood ku sbeegmaya xilii Madaxweynaha, Raysalwasaaraha iyo Afhayeenkii Baarlmaankuba ay dalka ka maqan yihiin.